टोक्यो देखि ओसाका सम्म - कसरि टोक्यो देखि ओसाका सम्म जाए? - Samurai and Ninja in Japan
टोक्यो देखि ओसाका सम्म – कसरि टोक्यो देखि ओसाका सम्म जाए?
कसरी टोक्यो देखि ओसाका बाट जानुहुन्छ? Shinkansen छिटो रेल र अन्य ट्रांसटिनटिन विकल्पहरू
टोकियो देखि ओसाका सम्म जाने को सबै भन्दा राम्रो तरीका Shinkansen छिटो ट्रेन हो। शंकसेन्सेन छिटो रेलको लागत (टोक्यो-ओसाका) एकै तरिकाको लागि 13600 हो । राउण्ड ट्रिपको लागि लागत लगभग 27200 छ । टोक्यो-ओसाका शंकसेन्सन सवारी लगभग3घण्टा छ। पहिलो शंकसेन्सन छिटो रेलगाडि 6:26 बजे टोक्यो बाट प्रस्थान गर्दछ । आखिरी शंकसेन्सन छिटो रेल टोक्यो बाट 21:20 बजे प्रस्थान गर्दछ। त्यहाँ हरेक 10 मिनेटको शंकसेन्सन बुलेट ट्रेन सेवा छ । तपाइँ अनलाइन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ तर यो स्टेशनमा टिकट खरीद गर्न अधिक सुविधाजनक छ।
टोक्यो देखि ओसाका सम्म शिंकनसेन फास्ट ट्रान्स
Categoriesब्लग Nepali TagsShinkansen फास्ट रेलगाडी, ओसाका, कति खर्च गर्दछ, कसरी जाने, छिटो रेल, जापान, जापान परिवहन, जापानमा यात्रा, टोकियो देखि ओसाका, टोकियो देखि ओसाका सम्म कसरि प्राप्त गर्ने, टोक्यो, टोक्यो देखि ओसाका सम्म, बस, बुउलेट ट्रेन्स, यातायात, रेल, हवाई जहाज
Previous PostPrevious क्युटो देखि ओसाका सम्म – क्यूटो देखि ओसाका सम्म कसरि जाए?
Next PostNext Fra Osaka til Tokyo – Hvordan går du fra Osaka til Tokyo?